दान दिएकाे जग्गामा प्रहरी चाैकी खैई ? - Chandragiri News
Home समाज दान दिएकाे जग्गामा प्रहरी चाैकी खैई ?
दान दिएकाे जग्गामा प्रहरी चाैकी खैई ?
२०७७, १८ श्रावण आईतवार २३:०७
रामेछापकाे खाँडादेवी गाउँपालिकाकी शान्ता कार्की र बिन्दा कार्कीले प्रहरी चाेकी निर्माण गर्न दिएकाे जग्गामा प्रहरी चाेकी बन्न नसक्दा निरास भएका छन् ।
उनहरूलाई सधैँ लाग्थ्यो- धन भएर मात्रै केही हुँदैन, मन पनि चाहिन्छ । त्यहि साेच भएर उनिहरूले गाउँमा शान्ति सुरक्षा हाेस भने चाहानाले जग्गा दान दिएका थिए ।
राजनीतिक दलका विभिन्न कार्यक्रमबाट सधैँ टाढै रहने कार्कीद्वयलाई लाग्थ्यो- गाउँपालिकामै एउटा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न पाए गाउँमा शान्ति सुरक्षा कायम हुन्थ्यो । आमनागरिकको सुरक्षाको सहारा प्रहरी भइदिन्थे ।
यही पवित्र सोचले गाउँपालिकाको चोप्राङमा अस्थायी रूपमा बसेको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई खाँडादेवी गाँउपालि- ६, माकादुङमा राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सार्न विभिन्न ठाउँमा पनि गएका थिए । पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबै ठाउँमा यो कुरा पुग्यो ।
सबैको एउटै स्वर थियो, ‘हुन्छ किन नहुनु ? गाउँपालिकाको भवनहरू पनि वडा नम्बर- ६ मै छ । त्यहाँ इलाका प्रहरी कार्यालय राख्दा झन् राम्रो ।’ मनकारी शान्ता र विन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाम र जिल्ला प्रहरी कार्यालको उक्त निर्णयमा खुसी भए ।
भनिदिए, ‘खाँडादेवीमा इलाका प्रहरी कार्यालय राख्नु नै हुन्छ भने हामी जग्गा दान दिन्छौँ । त्यसबापत हामीलाई केही चाहिँदैन । प्रहरी कार्यालयचाहिँ बन्नुपर्‍यो । हामी जग्गा उपलब्ध गराउन तयार छाैँ ।’
त्यसमा गाउँपालिको समेत सहमति थियो । कार्की परिवारले प्रहरी भवन बनाउने शर्तसहित ४ रोपनी ३ पैसा जग्गा दान गरे । बीपी राजमार्गको नजिकै करोडौँ रुपैयाँ पर्ने उक्त जग्गा दान दिएपछि प्रहरी चौकी बन्नेमा उनीहरू ढुक्क थिए ।
एकाएक निर्माणमा अवरोध
भवन निर्माणका लागि टेन्डरको कामसमेत पूरा भयो । तर, निर्माण हुन लागेको भवन अहिले गाउँपालिकाले एकाएक रोकेपछि भने उनीहरूको मन नमीठोसँग कुँडिएको छ ।
गाउँपालिकाले प्रहरी भवन निर्माणभन्दा पनि उक्त जग्गा अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खोजेपछि भने जग्गादाता कार्की परिवार निराश बनेका छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङ र वडा नम्बर- ६ का अध्यक्ष पुष्कर कार्कीले उक्त जग्गा जुन प्रयोजनका लागि दान दिइएकाे हाे, सोअनुसार काम नगरी अर्कै प्रयोजनमा लगाउन खोजेका तर जग्गादाता परिवारका सदस्य नारायण कार्कीको भने जुन उद्देश्यका लागि जग्गा दान गरे त्यहीँ भवन बन्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘मेरी श्रीमती र दाइकी श्रीमतीका नाममा रहेको उक्त जग्गा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माणका लागि भनेर दान दियौँ, गाउँपालिकाकाे सहमतिमै हामीले दान दिएका हाैँ । तर, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले अहिले रोक्न खोजे ।’
उक्त विषयलाई लिएर जग्गादाता कार्की परिवार र गाउँपालिकाबीच चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । उसाे त यसअघि कार्की परिवारले गरेकाे दानकाे जग्गामा प्रहरी भवन निर्माण गर्न वडा- ६ का अध्यक्ष पुष्कर कार्कीले नै सिफारिस गरेका थिए । तर, उनै कार्कीसमेत अहिले उक्त ठाउँमा भवन निर्माण नगर्ने पक्षमा उभिएका छन् । प्रहरी भवन निर्माणको लागि टेेेन्डर प्रक्रिया भइ खानी निर्माण सेेवा प्रालिले मोबालाइजेेेसन रकमसमेत लिइसकेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङ भने गाउँपालिकाको भवन वित्तीय संस्था बनेको ठाउँभन्दा करिब ३ किलोमिटर टाढाको जग्गा उनीहरूले दान दिएको र गाउँपालिकाको भवनबाट टाढा हुने भन्दै रोकिएको बताउँँछन् ।
प्रहरी चाेकी बन्नु पर्छ र समाजमा भएका व्यथिति अन्तय गर्न अाम समाज पनि लाग्नु पर्छ । समाज रूपान्तरण मा ४ राेपनी जग्गा दान दिएर प्रहरी चाेकी स्थापना गर्न दिनु पनि एक उदाहरणीय कार्य हाे । बास्तबिकता पहिचान गरि केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयले पनि सकारात्मक कुराकाे सहजिकरण गरिदिन तर्फ केन्द्रत हुन र बन अावश्यक छ ।
Previous articleनागढुङ्गामा प्रशासकिय प्रमुख कृश्नकान्त उपाध्याय नगद सहित अख्तियारको फन्दामा
Email : [email protected]irinews.com